Gargaarka bina-aadamnimada: Shiinaha ayaa siisay wax kabadan hal bilyan Cameroon - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA • COMPANY Gargaarka bina-aadamnimada: Shiinaha wuxuu siinayaa wax kabadan hal bilyan Cameroon
Taageerada bini'aadanimo: Shiinaha ayaa lacag ka badan hal bilyan oo doollar ugu deeqday Cameroon
Shiinaha ayaa ku deeqay hal mar oo ah 700 milyan FCFA gudaha Cameroon, kaas oo loo isticmaali doono gargaarka bini'aadminimo ee Fog-Waqooyi, Bari, Koonfur-galbeed iyo Waqooyi Galbeed.
Difaaca weyn ee reer Cameroon markii loo eego 13 bishii Maajo ee la soo dhaafay shir aan rasmi ahayn oo Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay uu ku yeeshay Cameroon, Shiinaha wuxuu siiyay dowladda Cameroon, baqshad dhan hal bilyan 700 milyan F CFA. Deeqdan muhiimka ah ee aan la qaddarin, waxay ogeysiineysaa Crtv TV, in loo isticmaali doono gargaarka bini'aadannimo ee gobollada Waqooyiga fog, Bariga, Waqooyi Galbeed iyo Koonfur Galbeed. Boqortooyada Dhexe ayaa sii wadaysa inay muujiso taageerada ay u fidiso Cameroon, oo soo food saartay xaalad bini'aadannimo oo deg deg ah oo ay sababaan weerarada kooxda argagaxisada ee Boko-Haram iyo qalalaasaha dhaqan-siyaasadeedka ee gobollada ku hadla Ingiriisiga.
Ku dhawaaqidaas waxaa lasiiyay intii ay dhagaystayaasha Wasiirka Arimaha Dibada Lejeune Mbella Mbella siiyeen safiirka Shiinaha u fadhiya Cameroon Wang Yingwu. Ka sakow deeqdan, Shiinuhu wuxuu ku taageeray, sida Russia, Cameroon, shirkii aan caadiga ahayn ee xubnaha Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay (UN) ee ku saabsan xaaladda bina-aadamnimada ee Cameroon. Shiinaha ayaa xasuustay in "Cameroon ay leedahay macnaha ay ku xallin karto dhibaatooyinkeeda gudaha". "Xaaladda gobollada Waqooyi-galbeed iyo Koonfur-galbeed waa mushkilad hadda ka jirta Cameroon waxaan aaminsanahay in mas'uuliyiinta Cameroon, dowladda iyo sidoo kale dadku ay karti u leeyihiin oo ay wax ka qaban karaan xaaladda. Beesha caalamku waa inay xushmeysaa madax bannaanida iyo jiritaanka dhuleed ee Cameroon. Waa in la aqoonsado in Cameroon ay door wax ku ool ah ka qaadatay dagaalka ka dhanka ah argagixisada Boko-Haram iyo inay soo dhoweyso qaxootiga ka imanaya waddamada deriska ah, ”ayuu yiri danjiraha Shiinaha u fadhiya Cameroon isagoo ku hadlaya makarafoonka TV Crtv. Dibloomaasi Shiine ah wuxuu ku casuumay bulshada caalamka inay tixgeliyaan dadaalka dowladda Cameroon ka wado marxalada lama taabtaanka ah ee xasilloonida Cameroon iyo midowga Bartamaha Afrika.
Isla mowqifka Shiinaha, safiirka Ruushka ee Cameroon sidoo kale wuxuu dhagaystayaasha ku qaabilay, wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda Cameroon ay wax ka qaban karto xaaladda gobollada ku hadla Ingiriisiga dhibanayaashu ku dhowaad 3 sano ee qalalaasaha dhaqan-siyaasadeed. Sidoo kale Anatolio Ndong Mba, danjiraha Equatorial Guinea, oo ah xubin aan joogto ahayn xubin ka ah Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, oo sidoo kale ka hadlay labada dal ee kale ee Afrikaanka ah ee xubin ka ah ururkan, Koonfur Afrika iyo Côte d'Ivoire, oo sheegtay intii uu socday kulanka, in xaaladda bini'aadannimo ee ka jirta Cameroon "aysan qatar ku ahayn nabadda iyo amniga caalamiga ah" iyo "waa in ay maamushaa dowladda Cameroon". Waxa kale oo uu xusay “inay yihiin dadka afrikaanka ah ee ay tahay inay xalliyaan dhibaatooyinka Afrika. "
80 km / h: Philippe waxa ay u aragtaa "wax dhib ah" si ay u oggolaadaan in wasaaradaha ay ka soocaan xukunka
"Dawladdu waa xaqiiqo rasmi ah oo ka sarraysa danaha shakhsi iyo goboleed"